Igumbi lokulala eli-3 kwiVilla yaseTropiki enePhuli eKite Lagoon - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-3 kwiVilla yaseTropiki enePhuli eKite Lagoon
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguInam
UInam unezimvo eziyi-189 zezinye iindawo.
Le yindawo yokuzimela yohlobo olunye, phakathi kwechibi lekite yaseKalpitiya kunye nemithi yekhokhonathi. Le villa yegumbi lokulala eli-3 liya kukuvumela ukuba ube neholide yakho eyenziwe ngobuchule eyenziwe yiTropiki, ekhethekileyo kukuthanda kwakho. Sinomdla malunga neenkcukacha kwaye sizinikele ekudaleni amava omntu esona siqithi sethu sincinci sinokunikezela.
I-villa yinxalenye ye-9 yokulala ye-lagoon resort kodwa i-villa yiyunithi yabucala ngokupheleleyo kwaye ikunika ubumfihlo kunye nethuba lokubaleka ngokwenene. Ngegadi enqabileyo, indawo yokuphumla kunye nevenkile yokutyela esasazeke kwipropathi enkulu, uya kuziva ubumfihlo kunye nokuzola okufunayo. Igumbi ngalinye lineeshawari zalo zangaphandle kunye nebhedi yobukhulu benkosi, ukwenzela ukuthambisa okongeziweyo.
Sisebenza ngokukhethekileyo kwi-eco-luxury, ukuhlala kufutshane nendalo kunye nazo zonke izinto ezisitsalele kule paradesi kwasekuqaleni. Khetha kumava ahlukeneyo aqinisekileyo aza kukunceda uphumle. Ukusuka ekulobeni ebusuku kwichibi elizolileyo phantsi kophahla lweenkwenkwezi ezikhanyisiweyo ukuya kwipiknikhi kunxweme olufihlakeleyo, jonga umhlaba oya kukwenza uzive ngathi uRobinson Crusoe. Ukutya kwethu okudityanisiweyo kubhiyozela yonke into malunga nale ndawo ikhethekileyo, njengoko usonwabela usuku ngalunye ukubanjwa okutsha kokutya kwaselwandle okwenzelwe iresiphi ekhethekileyo yompheki.
I-Peninsula yaseKalpitiya ineemeko ezigqibeleleyo zemisebenzi ekhethekileyo efana nehlengesi kunye nokubukela iminenga, kunye ne-kite surfing kunye nemidlalo egqithisileyo. Iidolphin ngamakhulu zidla ngokubonwa zidlala kumanzi akude nonxweme. I-Safari yesikhephe ibonelela ngezimvo ezikufutshane zezi zikolo zezilwanyana ezanyisayo ezihamba ngamaza. I-Kalpitiya, enemimoya ekufutshane engaguqukiyo, ithathwa ngokubanzi njengeyona ndawo ibalaseleyo yokusefa kwikhayithi.